बल टेम्पिरिङ आरोपमा प्रतिबन्धमा परेका डेभिड वार्नर पुन: क्रिक्रेटमा फर्किए...
काठमाडौं । केहि समय अगाडि बल टेम्पिरिङ गरेको आरोपमा एक वर्षको लागि सबै प्रकारका क्रकेट खेल्नबाट प्रतिबन्ध लगाईएका अष्ट्रेलियन क्रिकेटर डेभिड वार्नरले अब भने क्लब क्रिकेट खेल्न पाउने भएका छन् ।
उनलाई क्लव खेल्न खेल्न फुकुवा भएसँगै सिड्नीको रान्डविक पिटरसाम क्बलबाट खेल्न पाउने भएका छन्। गत मार्चमा दक्षिण अफ्रिकामा भएको दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको टेस्ट क्रिकेट बल टेम्पिरिङ गरेको अभियोगमा क्रिकेट उपकप्तान समेत रहेका वार्नरसहित स्टेभन स्मिथलाई कारवाही गरिएको थियो।
जस मध्ये तत्कालिन कप्तान स्टेभन स्मिथ र उपकप्तान वार्नरलाई एक वर्ष अनि क्यामरुन बेनक्राफ्टलाई ९ महिनाको लागि प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।
पछि अस्ट्रेलियन खेलाडी संघ र अन्य विभिन्न निकायको आग्रहपछि उनीहरुलाई क्लब क्रिकेटमा खेल्न भने अनुमति दिईएको हो ।अन्तर्राष्ट्रिय र स्टेट क्रिकेटमा प्रतिबन्ध लागे पनि उनले अब भने प्रतिबन्धित भएको एक वर्षसम्म क्लब क्रिकेट खेल्ने छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ०३, २०७५१४:३४
घाइते रामोसले स्पेनको राष्ट्रिय टोली छाडे
विश्व फुटबलका दुई महारथी मेस्सी र रोनाल्डोको आज अग्निपरीक्षा ! [ खेल तालिका र समयसहित ]
मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पनि चुनौती दिँदै पियाटेक !
रियलका सबै फरवार्डभन्दा सुआरेजको गोल धेरै
[LIVE]पीपीएल क्रिकेटमा चितवन राइनोज र बुटवल ब्लाटर भिड्दै ! लाइभ यहाँ हेर्नुहोस् ![LIVE]